Nkaissery oo ku goodiyay in dowlada ay gacan bir ah kuqaban doonto shaqsiyadka ku howlan kicinta shacabka – The Voice of Northeastern Kenya
Nkaissery oo ku goodiyay in dowlada ay gacan bir ah kuqaban doonto shaqsiyadka ku howlan kicinta shacabka
Wasiirka wasaarada arimaha gudaha iyo iskuduwaha amaanka qaranka Joseph Nkaissery ayaa oga digay dadka isticmaala baraha ay kuwada xiriiran bulshada in ay ku soo qoraan mise ay soo dhigaan hadalo shacabka kici kara.
Wasiirka oo si gaar ah ula hadlayay milkiilayaasha shabakadaha ayaa sheegay in hadalo naceyb ah oo lasoo dhigo goobaha ay bulashada kuwada xiriirian oo ay u badan yihiin, ay tahay in dalka dib loogu celiyo wixii dhacay sanadkii 2007-dii doorashadii dalka ka dhacday kadib.
Mr Nkaissery oo ka hadlayay kulan ay kasoo qeyb galeen gudiga wadajirka ee aqalalada senetka iyo aqalka barlamaanka ayaa dhanka kale ugu baaqay siyaasinta in ay ka feejignaadan hadalada ay dadweynaha u jeedinayaan waxuuna baaqas mid lamid ah u diray warbaahinada gaar ahaan kuwa internedyada wax ku qora.
Hadalkan kasoo baxay Mas’uulkaasi ayaa imaanaya iyadoo goor sii horeysay mudanayaal katirsanaa labada aqal ee dalka loo xiray hadalo qalafsan oo la sheegay in ay jeediyeen kuwaas oo dhici karto in ay abuuran kicin.
Wasirka oo kulankaasi ku wahelinayeen mas’uuliyiin kale oo sar sare oo ay kamid ahaayen wasiirka isgaarsiinta iyo tecnoolijiyada dalka Joe Mucheru iyo taliyaha ciidamada booliska Joseph Boinnet ayaa waxaa uu sheegay in ay si wangsan isugu diyaariyeen la dagaalanka dadka qalaalaasaha abuuraya.
Kulankaasi oo uu shir gudoominayay xildhibaanka degmada Tarbaj Mahamed Elmi ayaa looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa shaqsiyaadka caadestay in ay websatyadooda mise ciiwanada ay leeyihiin kusoo qoraan hadalo kiciniya dadweynaha oo marka dambe ka dhalan karto in dalka dhibaato lugaha la galo kadib doorashada la filayo in ay daka ka dhacdo 2017.
Dacwad soo oogaha guud ee dalka Kariako oo kamid ah mas’uuliyiinti ka qeyb gashay madashaasi ayaa waxaa uu dhankiisa xaqiijiyay in siyaasintii goor sii horeysay lagu eedeyay hadalada naceybka abuurayo ay hadda baaritaano ku socdaan islamarkaana aan la hari dooninin.
← Nkaissery oo beeniyay khilaafka la sheegay in uu u dhaxeeyo taliyaha booliska iyo madaxa gudiga adeega booliska
Dowlada oo sheegtay in sanadkan gudihiisa 10,000 oo macalimiin ah la dalacsiin doono →